Caawinta FS2004 sano 3 6 bilood ka hor #18
Haddii aad la kulantid dhibaatooyin, khaladaad ama haddii aad su'aalo ka qabto xiriiriyaha FS2004, halkan ku dheji. Sidoo kale noo sheeg wixii ku saabsan hagaajinta iyo xalalka dhibaatooyinka iyo qaladaadka FS2004.
Caawinta FS2004 sano 3 4 bilood ka hor #213
Hello Waxaan soo iibsaday xirmo loogu talagalay B777 aniga FSX ka Rikooo mana awoodo inaan taabto \_ u isticmaal FMS ama shey kasta oo ku saabsan soo-dejinta. Fadlan caawi
Aad ayaan ugu cusub ahay FSX. Thanks.
Caawinta FS2004 sano 3 4 bilood ka hor #214
Waan la yaabi karaa haddii aan isku dayo inaan ku caawiyo. ...
Marka hore, meel khaldan oo la isweydiiyo, tani waa in laga caawiyo FS2004, maahan FSX.
Marka labaad, habka aad u qortey midaan, si fudud ayaan u fahmi karaa.
Saddexaad, faahfaahin dheeri ah, nooca diyaaradu si toos ah u soo dejisay.
Qodobka afaraad, runtii ma u maleynayo inaad ka iibsatay diyaarad halkan. Inta aan ogahay, wax kasta oo halkan waa freeware.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.265